I-DTG → ngqo kwi-Garment yoshicilelo yindlela ethe ngqo yale mihla
Ukuprinta kwe-DTG-yindlela yale mihla yokuhombisa ngokuthe ngqo
Ukuprinta kwe-DTG okanye "ngqo kwimpahla" indlela yale mihla ukuhonjiswa ngokuthe ngqo kwamalaphu kunye neempahla. Inkqubo ye-DTG ikuvumela ukuba ufake nayiphi na imizobo kwilaphu lomqhaphu okanye umqhaphu ngokudibanisa i-elastane / viscose. Imizobo yenziwa kusetyenziswa umshicileli okhethekileyo. Izixhobo esinazo kwipaki yethu yomatshini yimodeli yoshicilelo yamva nje Mzalwana GTXpro Bulkleyo, enkosi kwiintloko zeshishini, ngokukhawuleza ishicilela ngokuthe ngqo kwizinto eziphathekayo. Ukuprinta ngobuchule be-DTG kwenza ukuvelisa umbala ogqibeleleyo ngokutshintsha kombala. Ukuprinta kunokwenzeka ngaphandle kwesidingo sokulungiselela iprojekthi kwisiqwengana nje esinye.
Ukuprinta ifoto kwisikipa usebenzisa indlela ye-DTG
Ukuqina kokuprinta kwe-DTG kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Okokuqala, imodeli kunye neeparameter zayo - esitsha isixhobo, kokukhona mgangatho ongcono yaye ukuvelisa. Eminye imiba echaphazela ukuhlala ixesha elide ziintlobo zeepeyinti ezisetyenzisiweyo, ilaphu apho ushicilelo lwenziwe khona kunye nezakhono zomsebenzi.
Umshicileli wethu uMzalwana GTXpro Bulk wenza ukuba kwenzeke shicilela ngemilinganiselo ephezulu ye-40,6 cm x 53,3 cm. Ndiyabulela ekunciphiseni kweendleko kunye nexesha lokugcina, kunokwenzeka ukulungiselela umatshini ukushicilela ngokukhawuleza kunye nokunciphisa inani leziphazamiso emsebenzini. Ukuphakama okuphezulu kwentloko akupheleli nje ekuyekiseni inkqubo yokuprinta xa isondli isondele entloko, kodwa ikwanomdla kumgama omkhulu kakhulu phakathi kwentloko kunye ne-feeder, ehlala iqinisekisa umgangatho ophezulu wokuprinta. Intloko entsha, ephucukileyo ye-inki emhlophe kunye nenani elinyukayo lemilomo inikezela ngemowudi yokuprinta eyi-10% ngokukhawuleza. Oku, kuguqulela kumaxesha amafutshane okuqhubekeka komthengi.
Umshicileli we-DTG ngqo
Amathuba abanzi okuprinta kwe-DTG
Umshicileli omtsha we-DTXpro Bulk yimodeli eguqukayo kwaye eguquguqukayo kakhulu. Inika amanqaku kwimveliso yobuninzi, isenza ukuba kulungele ukuzaliseka kwee-odolo kwizinga elikhulu.
IZITOLO NEENTENGISO: I-GTXpro sisisombululo esifanelekileyo sokulungisa uluhlu lweevenkile, iiarhente zentengiso, amaziko, iiklabhu kunye neendawo zokusebenzela. Itekhnoloji ye-DTG iguquguqukayo kwaye iyahambelana. Enkosi ngayo, unokwandisa indawo yakho yokugcina kunye neemveliso ezizezakho ezinje nge Iikipa wonke umntu onegama lakhe, isihloko somsebenzi, Iingxowa zentengisonditsho nezihlangu ezinobugcisa bakho. I-Personalizacja iyakuthanda ukuchongwa komsebenzisi kunye nophawu, olunempembelelo kuye ukwanda komfanekiso nokuzithemba.
Ukuprinta kwe-DTG kwiqela lamavolontiya i-T-shirts
IIMBONO ZAMAQELA NEZIPHO NGAMNYE: IKrisimesi, i-Ista, ijubili, impumelelo kwezobuchwephesha, uSuku loomama okanye uSuku lwaBantwana zezona zihlandlo zidumileyo zokulungiselela izipho ezithile. Umntu ozimeleyo, owenziwe ngamanye amaxesha-ngcono ukubonakala kunye nendawo eyomeleleyo. Izipho zenkampani kubasebenzi okanye izipho zenkululeko njenge amabhaso kukhuphiswano lithuba elihle lokuba ukufudumeza umfanekiso. Kananjalo, izipho, ngakumbi ezisebenzayo, ezinje ngeetawuli zokukhumbula iminyaka engama-20 ubukho benkampani okanye uphawu lwebhaso olufunyenwe yinkampani, ziya kuba sisixhobo esikhulu kumaqabane kunye nabathengi abanokubakho for gxininisa indawo yenkampani ngokuchasene nokhuphiswano.
Kwelinye icala, ukubanakho ukushicilela kwisiqwengana esinye kuvula ukhetho lokulungiselela isipho sentsusa somntu obalulekileyo ngosuku olukhethekileyo. Ubudlelwane bomntu ngamnye obuzukisiweyo ngesipho esenziwe ngentatho-nxaxheba yakhe, kunye nomgangatho ophezulu, uya kushiya iinkumbulo ezimnandi iminyaka emininzi. I-GTXpro ikuvumela ukuba uhlale ubhetyebhetye kwimveliso, isinika ithuba lokuphendula ngokukhawuleza nakuqoqosho kutshintsho lweeodolo.
Ukuprintwa kwe-DTG akudingi kulungiswa kweprojekthi, yenye yeenzuzo zayo eziphambili (njengoko kunjalo nokuprinta isikrini okanye isambatho sekhompyuter). Ukuphunyezwa kwayo kunokwenzeka ngokuthe ngqo kwifayile yomthengi, ekufuneka ihlengahlengiswe ngokufanelekileyo. Kuyenzeka ukuba uprinte kwinto enye, ekuvumela ukuba uyenze ukuprinta ukuvavanya ngaphambi kokwenza ubungakanani obukhulu. Kwakhona phrinta ifoto kunokwenzeka, kodwa kubalulekile ukuba kwisisombululo esiphezulu kunokwenzeka.
UKUZIMA: Kuluncedo olukhulu ukuhlala ixesha elideukuba yenziwe kwizixhobo zobungcali. Ukusetyenziswa kophuculo olutsha ekusebenzeni ngakumbi koqoqosho kuvumela iindleko eziphantsi kakhulu zokushicilela. Izinto eziphathekayo kufuneka zibe yikotoni okanye kunye ne-viscose, okanye i-elastane, kodwa kubalulekile ukuba ungabi wolula kakhulu.
Ukulandela iingcebiso zomenzi kuya kusivumela ukuba sonwabele umphumo weprojekthi yethu ixesha elide. Enkosi ngoncedo lweqela lethu, uya kulungelelanisa indlela yokuhombisa, kwaye ungakhetha ezona mveliso zifanelekileyo kwezethu Ivenkile.
Ukuprinta kwe-DTGukushicilela kwimpahlaI-DTG kwiingxowaI-DTG ngexabiso eliphantsiizixhobo ezineprintaI-T-shirts eziprintiweyoukuprinta ngqoukuprinta imifanekiso kunye nemibhalo ebhaliweyoukuprinta ilogo yenkampaniphrinta kwii-sweatshirtsukushicilela kwiiT-shirtsukuprinta kwizikipa zalo msithoshicilela kwimpahlaukuprinta kwimpahla ngexabiso eliphantsiukuprinta kwiikipaukushicilela ezingxoweniukuprinta kwinto enyeukuprinta ukuvavanyaushicilelo lweefotoibhaso kukhuphiswanoImpahla enoshicilelo lwabasebenziisipho sogogoisipho sotatomkhuluisipho somfaziisipho kumamaisipho sendodaisipho kumhloboisipho kumhloboisipho sodadeisipho kutataisipho sekrisimesiisipho sesikhumbuzoisipho sokuzalwaizipho zabasebenziizipho ezizimeleyoizipho zeholideizipho ezenzelwe wenaushicilelo ngexabiso eliphantsiukuprinta okungabiziushicilelo lwelogo olusisigxinaushicilelo lwakho kwiiT-shirtsukuprinta kwakho ezingubeni
5 / 5 ( 6 iivoti )